सेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, कारोबार रकम बढ्यो
२०७६ कार्तिक २ गते ८:३२
काठमाडौं ,२ कात्तिक । गत सोमबारसम्म लगातार घटेको सेयर बजार मंगलबार र बुधबार लगातार बढेको छ। मंगलबार २६.९१ अंकले बढेको सेयर बजार बुधबार २२.६८ अंकले बढेर ११७३.४२ विन्दुमा पुगेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ४.१४ अंकले बढेर २५५.७० अंकमा पुगेको छ। बुधबार ४७ करोड ६८...
ह्वात्तै घटेयो सुन चादिको मुल्य हेर्नुहोस आज कति छ।
२०७६ कार्तिक १ गते १४:५५
काठमाडौं , १ कात्तिक । आज नेपाली बजारमा सुनको मूल्य यथावत रहेको छ । बिहिबार प्रतितोला ७० हजार ६ सय रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मुल्य आज पनि सोहि मुल्यमा नै कारोबार भैरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला ७०...
इन्धनको मूल्य बृद्धिको विरोधमा प्रदर्शन, ६ जनाको मृत्यु
२०७६ असोज ३० गते ८:२५
काठमाडौं, ३० असोज । इक्वेडरमा इन्धनको मूल्य वृद्धिको विरोधमा करिब १० दिन अघिबाट शुरू भएको हिंसात्मक झडपमा छ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदर्शनमा १ हजार ५०७ व्यक्ति घाइते भएका त्यहाँको सरकारले मङ्गलबार जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रदर्शनको क्रममा १ हजार ३३० व्यक्ति...
राष्ट्रपति सी स्वागतमा सजावटमा मात्रै २० करोड खर्च !
२०७६ असोज २६ गते १२:०२
काठमाडौं ,२६ असोज । छिमेकी देश चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागतका लागि सजावतमा २० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सी शनिबार नै नेपाल भ्रमणमा पुगिसक्नुभएको छ । नेपाल सरकार काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा सजावटमा मात्रै २० करोड खर्च गरिएको हो । कारोबारमा खबर छ...
२०७६ असोज २६ गते ११:१२
काठमाडौं ,२६ असोज । आज सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदी स्थिर रहेको छ । शुक्रबारको तुलनामा आइतबार बजारमा सुन ३ सय रुपैयाँले घटेको हो । छापावाला सुन आज प्रतितोला ७० हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।...
सुनको भाउ तोलामा ६ सयले सस्तियो
२०७६ असोज १२ गते १३:११
काठमाडौं, १२ आश्विन । साताको पहिलो दिन आइतबार सुनको भाउ घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन तोलामा ६ सय रुपैयाँले सस्तो भएको हो। शुक्रबार प्रतितोला ७२ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको भाउ आइतबार ७२ हजार २ सय रुपैयाँ...
२०७६ असोज ९ गते १८:००
काठमाडौं, ९ असोज । साताको पाँचौ दिन बिहीबार सुनको मूल्य घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार ७१ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य तोलामा बिहीबार ६ सय रुपैयाँले घटेर ७१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य...
बुधबार झन् बढ्यो सुन-चाँदीको भाउ, तोलामा कति पुग्यो ?
२०७६ असोज ८ गते १५:३६
काठमाडौं, ८ असोज । आज (बुधबार) सुनको भाउ झन् उकालो लागेको छ । मंगलबार तोलाको एक सय रुपैयाँ बढेको सुनको भाउ आज पुनः प्रतितोला ६ सय रुपैयाँ बढेको हो । आज बजारमा छापावाल सुन प्रतितोला ७२ हजार तथा तेजावी सुन प्रतितोला ७१ हजार ७...
एल.पी .ग्यास पुरानै भाउमा बेच्नेलाई कारवाही
२०७६ असोज ७ गते १९:५६
काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल आयल निगम (एनओसी)ले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै घटेको मूल्य अनुसार ग्याँस कारोबार नगर्ने व्यवसायीहरुलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी िदएको छ । सोमबार निगमले बजार अनुगमनका क्रममा पुरानै मूल्यमा एल।पी ग्याँस कारोबार भइरहेको पाइएकाले त्यसो नगर्न आम ग्याँस व्यवसायीलाई सचेत...
राष्ट्र बैंकले ५ खर्ब जलायो
२०७६ असोज ७ गते १९:३५
काठमाडौं, ७ असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ खर्ब ९४ अर्ब ७६ करोड ६९ लाख ९४ हजार ६२४ रुपैयाँ पुराना तथा झुत्रा नोट जलाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५ र ०७६ सम्ममा पुराना भएर जलाउने क्रम बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । राष्ट्र...
« अघिल्ला 1 …78910 पछिल्ला »